Amakhasi Wokuhlola Ukuhlola - Ipulani Lomklamo
Uhlelo lwekhasi lokufika elihloliwe
NgoLwesine, Septhemba 6, 2012 NgoLwesine, Septhemba 6, 2012 Douglas Karr
Enye ye-infographics ethandwa kakhulu esiyibonile ikhishwe ngabaxhasi bethu bezobuchwepheshe,I-Formstack , ebizwa Izindlela Zokuziphatha Ezihamba phambili Zekhasi.I-Formstack kulula ukuyisebenzisa ngendlela emangalisayo umakhi wefomu online unekhono lokwakha amakhasi okufika kusixazululo esifanayo.
Iplani Yekhasi Lokufika Elivivinywa Ngokuphelele: Amakhasi okufika ahlanganiswa neqembu lezinto ezichazayo. Amabhulokhi wokwakha avezwe ngezansi angasetshenziswa njengesiqondisi lapho uchaza futhi udala ikhasi lakho elihle lokufika!
Abantu be-KISSmetrics bahlukanise ikhasi lokufika kule infographic enhle, bakunikeza ukuwohloka kwezindawo okufanele uzihlole.
Tags: ukuhlolwaikhasi lokufikaukuklanywa kwekhasi lokwakhaukuhlolwa kwekhasi lokufikaukuhlolwa kwe-multivariate
I-Verge ihlanganisa i-Ecommerce kanye ne-Digital Publishing
Siyabonga ngokwabelana nge-infographic enhle! Ngiyathanda ukubona okuthunyelwe kuphuma izakhi zokuhlola nokwenza kube lula kubakhangisi ukuthi benze kangcono.